Accueil > Gazetin'ny nosy > Pôlitika: Tandremo sao tra-parany eo
Pôlitika: Tandremo sao tra-parany eo
Miverina indray ankehitriny ny fitenenana hoe “tandremo sao tra-parany eo”. Tena manomboka mangotraka ny raharaha pôlitika eto Madgasaikara ka efa mifamely tsy ankitsitsy intsony ireo mpifanandrina amin’ny andaniny sy ny ankilany. Mifampihantsy ankolaka ankehitriny ny mpifanandrina pôlitika ary efa mifampikapa ranjo mivantana aza indraindray. Tsy mitsitsy ny olona avy amin’ny antokon’ingahy Hery Rajaonarimampianina HVM (Hery vaovao ho an’i Madagasikara) sy ny mpomba azy manao izay hikapana ireo mpifaninana aminy amin’ny fifidianana. Hatreto dia ingahy Ravalomanana Marc sy Andry Nirina Rajoelina no asiany mafy. Izay tsy voaenjika amin’ny lalàm-pifidianana dia andrasana any amin’ny fitsarana. Ingahy Ravalomanana Marc aza dia azo lazaina fa tora-mitsangana mihitsy satria sady nosakanana tsy hahazo hiasa ny orinasany Tiko sy ny AAA, no mbola azon’ilay lalàna fehizoro tsy hahazo hilatsaka hofidiana ho filoham-pirenena indray. Niafarany dia nangina tsy niteny intsony ity filoham-pirenena be resaka sy be vava ity.
Ingahy Andry Rajoelina sy ny ekipany indray dia manomboka azo ny valifaty. Raha toa be fanoherana ny lalàna fehizoro tany amin’ny Antenimierampirenena ramatoa Razanamahasoa Christine izay depiote voafidy tany Ambatofinandrahana, avy amin’ny Mapar, dia fanesorana azy tamin’ny trano fonenany tamin’ny fomba mampalahelo no valin’izany. Ity depiote ity koa no isan’ny lohandohany nitondra ny fitarainana tany amin’ny HCC (Fahefana avo momba ny lalàmpanorenana) sy ny fitoriana tany amin’ny Bianco izay fanjakana izao.
Manomboka mamoaka feo koa amin’izao fotoana izao ny amin’ny mety hisian’ny korontana indray eto amin’ny firenena ny fikambanana sy olona maro. Ankoatr’izany dia Malagasy maro no manahy mafy ny tsy hahatanteraka ny fifidianana satria miharatsy hatrany ny toe-draharaha pôlitika sy ara-tsosialy.
Amin’ny fotoana toa izao dia samy milaza ny zavatra fantany avokoa ny mpandinika sy ny mpahay tantara ka milaza fa atahorana mafy ny raharaha pôlitika ankehitriny. Tsy vitsy ny olona milaza fa sarotra no hanatanterahana fifidianana amin’izao zava-misy ankehitriny izao. Ny sasany aza dia efa milaza fa aza tra-parany eo fa andrian’ny rihitra. Ny filohampirenena hoy izy ireo afaka mandeha mitsoaka any ivelany, fa mba handeha ho aiza ireo izay tsy manana fiaramanidina hitsoahana ? Dia aza tra-parany eo hoy ny fitenenana.